आरजु देउवा : प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाकाे ‘दाहिने हात’ पत्नी « Nepal Bahas
आरजु देउवा : प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाकाे ‘दाहिने हात’ पत्नी
डडेलधुरा कांग्रेसमा देउवा पक्षले गरेको जोरजुलुम, जालझेल र अत्याचारको एउटा कारण आरजुले छोरा जयवीरलाई राजनीतिमा प्रवेश गराउन पुराना तथा निष्ठावान् नेता–कार्यकर्ताको ठूलो समुहलाई पेल्न थालेपछि उत्पन्न भयो
प्रकाशित मिति : २४ पुष २०७८, शनिबार १०:४७
२४ पुस, काठमाडाैं । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा कफीहाउस खोल्न अघिल्लो ओली सरकारको पालामा स्वीकृति पाएका विवादास्पद व्यापारी आनन्दकुमार बतासको ‘बतास समुह’ को सल्लाहकारमा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवा रहेको सूचना सार्वजनिक भएपछि आरजुले यसको खण्डन गरिन् । समाचार र सोबारे खण्डनको सत्यापन हुन बाँकी छ ।
उनको खण्डनमा, ग्रामीण महिला विकास तथा एकता केन्द्र, साथी नेपाल, सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासङ्घ, नामी कलेज, यूल्लेन्स स्कुल र ब्लड डोनर्स एसोसिएशन अफ नेपालबाहेक अरु कुनै पनि संस्थामा सल्लाहकार अथवा अन्य कुनै पदमा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्टीकरण दिईन् । वक्तब्यमा उनी भन्छिन्, “…..उल्लेखित संस्थाबाहेक अरु कुनै पनि संस्थामा सल्लाहकार अथवा अन्य कुनै पदमा मेरो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।”
हालै सम्पन्न कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा महिलातर्फको खुला प्रतिष्पर्धाबाट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित आरजु यस्ता विवादमा बेला–बखतमा मुछिइरहन्छिन् ।डडेलधुरा कांग्रेसमा, कुनै बेला देउवाकै सहयोगी रहेका त्यहाँका अत्यन्त लोकप्रिय कांग्रेस नेता कर्ण मल्ललगायत कार्यकर्ताको ठूलो समुहमाथि देउवा पक्षले गरेको जोरजुलुम, जालझेल र अत्याचारको एउटा कारण आरजुले छोरा जयवीरलाई राजनीतिमा प्रवेश गराउन पुराना तथा निष्ठावान् नेता–कार्यकर्तालाई पेल्न थालेपछि विवाद र विद्रोहको अवस्था उत्पन्न भएको हो । यसअघि आफ्नी आमा, राप्रपाकी नेतृ प्रतिभा राणालाई जापानको राजदूत बनाउनमा उनले देउवालाई लगाएको जोडदार दवावलाई बुझेका मानिसहरू आरजुको मर्जीमा देउवा चल्ने गरेको निष्कर्ष बनाउँछन् । उनको बारेमा यस्ता विवाद किन आईरहन्छन् र उनले खण्डन गरिरहनु पर्छ ? यो गम्भीर सवाल छ ।
सबै तयारी पूरा भएपनि अन्तिम घडीमा आएर हालै स्थगित भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण तिथि भन्दाअघि, पुष १८ का दिन आरजुले दिल्लीमा करिब एक हप्तादेखि अपरेशन र उपचार गराईरहेका आफ्ना बैंकर भाई भुषण राणालाई हेर्न जाने बहानामा मोदीका निकटतम् नेता, सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवालेसँग भेटवार्ता गरिन् । देउवा दम्पत्ती यो (स्थगित) भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाएर आगामी स्थानीय निर्वाचनमा त्यसको प्रभाव लिनेमा दाउमा थिए। यो राजनीतिक भेटलाई लिएर एमाले नेता भीम रावलले ट्वीट गरे, ‘…..के अब नेपालको परराष्ट्र मामिलामा श्रीमान् र श्रीमती मामिला, स्वार्थ र प्रवृत्तिको प्रवेश हुन लागेको हो ?’
०५० सालमा काठमाडौंस्थित दशरथ रंगशालामा राप्रपाको महाधिवेशन उद्घाटन हुँदै थियो । मञ्चको व्यवस्थापन र सजावटमा खटिएका थिए, उनै प्रतिभा राणा र उनकी छोरी आरजू राणा । महाधिवेशनको लागि भारतबाट नेताहरुलाई याक एण्ड यति होटलमा राखिएको थियो । भारतीय नेताहरुलाई भेट्न पुगेका पत्रकारहरूलाई सहजीकरण गरिदिनेमा उनै आरजू थिईन् ।
गत असार अन्तिममा देउवा नेतृत्वमा ५ दलीय गठबन्धन सरकार बनेको ४० दिनपछि मात्र भारतीय संस्थापन पक्षले काठमाडौंमा दौडधुप बढायो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका विश्वासपात्र, भाजपाको विदेश विभाग प्रमुख, डा.विजय चौथाइवाले जनैपूर्णिमाका दिन काठमाडौं एयरपोर्टमा ओर्लेको लगत्तै बालुवाटारस्थित प्र.म. निवासमा पुगे । बालुवाटारमा प्र.म. पत्नी आरजुले चौथाईवालेलाई ‘रक्षाबन्धन’ मा भारतीय परम्परा अनुरुप राखी बाँधिदिएर भातृत्वको सत्कारसहित स्वागत गरिन् । गत जेठ २८ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुका तर्फबाट देउवासहित प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप भएको भन्दै सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेपछि भारत यो गठबन्धनदेखि झस्किएको र सशंकित थियो । त्यो आशंका मेटाउने उपचारको रुपमा‘राखी–बन्धन कुटनीति’ अगाडि आयो ।
करिब दुईतिहाई समर्थन लिएको यसअघिको सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट (निजी निवास) पठाउँदाको अवस्थालाई नयाँदिल्ली द्विविधामा परेर सावधान तथा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा थियो । प्र.म. देउवालाई भारतको बधाई लिनपनि संसदबाट विश्वासको मत हासिल गरेपछि मात्र सम्भव भयो । त्यसअघि प्र.म. मोदी नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ टेलिफोन गरी बधाई दिँदै भारत भ्रमणको निम्तो पठाईहाल्ने गर्दथे । त्यही बुझेर देउवाले प्रधानमन्त्री भएको पाँचदिनमै विश्वासको मत लिए । त्यसपछि मात्र भारतीयहरू देउवाको गठबन्धन सरकारलाई महत्व दिन थाले । भेटवार्ता सुरू गरे ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीचको सम्बन्ध पनि यस्तै किसिमले बनेको थियो । २०७४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा तत्कालीन बाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेपछि प्र.म. मोदीको विशेष दूत बनेर विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज माघमा अपर्झट नेपाल भ्रमण गरी ओलीसँग भेटवार्ता गरिन्, ओलीलाई ‘भाइ’सम्बोधन गर्न थालिन्, जुन बेला ओली प्रधानमन्त्री बनेकै थिएनन् ।
२०७२ सालमा प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा गएको दिन ओलीको जन्मदिन परेको थियो । उनले नयाँदिल्लीमै केक काटेर जन्मदिन मनाएका थिए। त्यसबेला पनि विदेशमन्त्री स्वराजले ओलीलाई भाईको नाता लगाएकी थिइन् । त्यस बेला सुष्माले ओलीलाई सम्वोधन गर्दै भनिन्, ‘मैले ओलीजीको बायोडाटा हेरें । उहाँ सन् १९५२ मा जन्मिनु भएको रहेछ, म पनि त्यही मितिमा जन्मेको हुँ । तर, म फेब्रुवरी १४ मा जन्में, उहाँ फेब्रुवरी २२ मा जन्मिनुभयो । ओलीजी भन्दा म आठ दिनले जेठो रहेछु। त्यसैले म एक दिदीको नाताले ओलीजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु ।’
“तपाईं दरबारतिर धेरै हिमचिम नबढाउनु होला है शेरबहादुर जी ! किन गर्नुहुन्छ यो विहे ? तपाईंलाई यसले राम्रो गर्दैन…., नगर्नुस् !” किसुनजीको यस्तै सल्लाह थियो । तर राजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रत्यक्ष नाता गाँसिने यो विवाह गरेर, राजा वीरेन्द्रको नागरिक अभिनन्दन गराएर र गोर्खा दक्षिण बाहु (गो.द.बा.) पहिलो तक्मा लिएपछि कांग्रेसभित्र देउवाको अर्को पहिचान बन्यो ‘शाहीकांग्रेस’ ।
पति देउवा पार्टी सभापति बनेको वर्तमान जल्दोबल्दो बेलामा पत्नीआरजु कांग्रेसको केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिन पुग्छिन् । ०५० सालमा काठमाडौंस्थित दशरथ रंगशालामा राप्रपाको महाधिवेशन उद्घाटन हुँदै थियो । मञ्चको व्यवस्थापन र सजावटमा खटिएका थिए, उनै प्रतिभा राणा र उनकी छोरी आरजू राणा । महाधिवेशनको लागि भारतबाट नेताहरुलाई याक एण्ड यति होटलमा राखिएको थियो । भारतीय नेताहरुलाई भेट्न पुगेका पत्रकारहरूलाई सहजीकरण गरिदिनेमा उनै आरजू थिईन् । नेपाली मिडियामा आरजूको पहिलो परिचय त्यहीबेला भयो । तर त्यसपछि आरजू राप्रपाभित्रको राजनीतिक परिदृष्यबाट एकाएक हराईन् । उनी एकैचोटी गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवासँग विवाह सम्बन्धले सञ्चारमाध्यमको चर्चा बनिन् ।
विवाहः पहिलो देखभेटमै आरजु देउवाको मन माराज गर्न सफल भईन् । त्यसअघि देउवाले एउटा पार्टीमा आरजुलाई देखेका थिए । दुई वर्षपछि फेरि शेरबहादुर र आरजुको भेट यही रिसोर्टमा जुर्यो । तर, भेटमा खासै कुरा भएन । पार्टीको मिटिङ र समारोहमा भेट हुन थाल्यो उनीहरूको भेटघाटमा राजनीतिक र औपचारिक कुरा बढी हुनेगर्थ्याे ।
देउवा र आरजुको विवाहको पहिलो कुरा चल्यो, बर्दियाको ठाकुरद्वारा स्थिति फोटोमा देखाईएको ‘बघउरा हाउस’ मा । लमी थिइन् नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लक, जसका पिता अमेरिकामा शरणागत चिनियाँ थिए । त्यो बेला नेपालमा अमेरिकी चासो चीनका गतिविधि निगरानी गर्ने केन्द्रको रुपमा विकसित हुँदै थियो । विश्वकै ठूलोमध्येको एक राजदूतावास भवन बनाउनमा अमेरिका लागिरहेको थियो र नेपालमा कम्युनिस्टहरूका संसददेखि सडक र जंगलसम्मका गतिविधि हेर्नु पनि थियो । त्यस निम्ति यहाँ कतिपय हस्तीहरूलाई हात लिनुपर्ने आवश्यकताले अमेरिकी राजदूत जुलिया देउवा र आरजुको व्यक्तिगत जीवनभित्र पसिसकेकी थिइन् ।
तर पार्टीका नेताहरू सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले देउवाको विवाहलाई विरोध गरेका थिए । “तपाईं दरबारतिर धेरै हिमचिम नबढाउनु होला है शेरबहादुर जी ! किन गर्नुहुन्छ यो विहे ? तपाईंलाई यसले राम्रो गर्दैन…., नगर्नुस् !” किसुनजीको यस्तै सल्लाह थियो । तर राजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रत्यक्ष नाता गाँसिने यो विवाह गरेर, राजा वीरेन्द्रको नागरिक अभिनन्दन गराएर र गोर्खा दक्षिण बाहु (गो.द.बा.) पहिलो तक्मा लिएपछि कांग्रेसभित्र देउवाको अर्को पहिचान बन्यो ‘शाहीकांग्रेस’ । २०४३ सालको पञ्चायती आमनिर्वाचनमा भाग लिन जोड गर्ने देउवा पञ्चायततिर नजाउन् भनेर नै उनलाई किसुनजीले लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्स्मा पढ्नको लागि लण्डन पठाईदिनु भयो । त्यसैले २०४६ को जनआन्दोलनमा देउवा देशभित्र थिएनन् र देशबाहिर पनि उनको कुनै भूमिका रहेन ।
जवाफमा जुद्ध शम्शेरले भने, “ल ल विनोद मेरो छोरो हो । उसलाई हेरचाहको लागि ६ लाख रुपैयाँ दिनु र बर्दियामा जग्गा पनि दिनु ।” त्यसपछि उनले राज्यबाट बर्दियामा जग्गा र त्यो रकम पाए । आमा प्रतिभा राणा राजा महेन्द्रका एडीसी शेरबहादुर मल्लकी छोरी हुन् ।
देउवाको विहे हुने दिनहरूमा तत्कालीन प्रतिपक्ष एमालेले सरकारविरुद्ध एकहप्ते नेपालबन्दको आयोजना गरेको थियो । गृहमन्त्रालयको आर्थिक सहायताको खोलो एमालेका नेता–कार्यकर्तातिर बगाईदिईरहेका गृहमन्त्री देउवाले एमाले नेताहरूलाई विहेमा बाधा नहालीदिन अनुरोध गरे । गृहमन्त्रीको अनुरोधलाई मानेर एमालेले देउवाको विहे सकिएको भोलीपल्टबाट मात्र नेपालबन्द गर्ने भयो ।
विहे गरेको धेरै वर्षसम्म राजनीतिक कुराकानीमा समेत सरिक नहुने आरजु, देउवाले २०५९ सालमा पार्टी फुटाएपछि मात्र राजनीतिमा क्रमशःदेखा पर्न थालिन् । लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनपछि दुवै कांग्रेसको एकीकरण र संविधानसभा चुनाव भएपछि पहिलो संविधानसभामा सभासद बनाउन देउवाले समानुपातिक निर्वाचनको एक नम्बरमा पेश गरेको नाम थियो, आरजू देउवा । दोस्रो संविधानसभामा पनि उनी सभासद भइन् । देउवा–आरजू दम्पत्तिको पहिलो र एकमात्र सन्तान जयवीर देउवाको जन्महुँदा यी आरजु प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा थिइन् । ०७ सालपछि बहालवाला प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुत्रलाभ गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि भए देउवा ।
पार्टी र सरकारमा हावी
देउवा प्रधानमन्त्री बन्दै गएपछि वालुवाटारमा क्रमशःआरजूकै खटन र भित्री निर्णय चल्दै गयो । आज उनीबिना देउवाको पात पनि नहल्लिने अवस्था भयो । यसअघिको ओली सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएका राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग आदि निकाय पूर्ववत रुपमा फिर्ता पठाउन देउवाले खोज्दा आरजुले नमानेपछि त्यो काम रोकियो ।
आरजूको महत्वाकांक्षा बढ्दै गयो । उनले समानुपातिक निर्वाचन छाडेर प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने निर्णय गरिन् । आरजूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनको सट्टा समानुपातिक निर्वाचनमा बस्न देउवाले धेरै सम्झाए तर उनी मानिनन् । उनले धनगढीमा तीन करोड रुपैयाँको घर किनिन् । घर किन्ने उद्देश्य हो, कैलालीबाट सांसद निर्वाचित हुने । कोही भन्छन्, यो घर किन्नको लागि गोरखाका भवन भट्ट, जो जापानमा रेष्टुरेन्टहरू चलाउँछन्, ले पैसा हालिदिए । देउवा पहिले कैलालीबाट पनि सांसद निर्वाचित भएका थिए । एमालेका निर्वाचित उम्मेदवार नारदमुनि रानाले २७ हजार २ सय २ मतका साथ विजय हासिल गर्दा कांग्रेसबाट आरजुले करिब पाँचहजार मतको अन्तर, २२ हजार ३ सय २२ मत पाएकी थिइन् । चुनाव हारेपछि उनी विरलै मात्र धनगढी जाने गर्छिन् ।
राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्शेर २००० सालमा शासन सत्ता छोडेर पाल्पाको रिडी–बासमा जाने भएपछि अर्जुन शम्शेर र विजय शम्शेरले उनलाई भने “नवजात विनोद (आरजुका पिता) सरकारकै सुपुत्र हो । यसको मुख हेरपछि सवारी होस् सरकार ।” जवाफमा जुद्ध शम्शेरले भने, “ल ल विनोद मेरो छोरो हो । उसलाई हेरचाहको लागि ६ लाख रुपैयाँ दिनु र बर्दियामा जग्गा पनि दिनु ।” त्यसपछि उनले राज्यबाट बर्दियामा जग्गा र त्यो रकम पाए । आमा प्रतिभा राणा राजा महेन्द्रका एडीसी शेरबहादुर मल्लकी छोरी हुन् । आरजुका पिताको विहे शेरबहादुर मल्लकी छोरीसँग भयो । आरजुका दाजुभाईहरू पनि छन् । बन्द ब्यापार गर्छन् । काठमाण्डू होटल, नेपाल एयरवेज आदि धेरै बिजेनेस कार्यमा हात हाले, तर कतै पनि सफल भएको देखिएन । असफल बिजनेसले बैंकहरूलाई सताउने गरेको समाचार आईरहन्थ्यो ।
भारतको चण्डीगढबाट मनोविज्ञान विषयमा पी.एचडी. गरेकी आरजु २०५३ देखि कांग्रेसको राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति देउवाको आडमा बसेर कांग्रेसको राजनीतिमा हावी भएकी छन् । सिंहदरबारमा गरिने हरेक उच्चस्तरीय निर्णयमा उनको चासो, स्वार्थ र प्रभाव रहने गरेको स्पष्टै दृष्टिगोचर हुने गर्छ ।
जनतालाई संकट पर्दा ओझेल पर्ने माओवादीका ‘किरण’